Izisetshenziswa Ze-cannabis Extraction - Inzuzo ye-Sonication - Hielscher Ultrasound Technology
Ukwenziwa kwamakhemikhali e-bioactive njenge-THC ne-CBD kusuka ku-cannabis kungenziwa ngamasu ahlukene. Imishini yesikhumba se-ultrasonic inenzuzo eminingi eyenza ibe yindlela yokwenza ngcono kakhulu. Ngenxa yezivuno zayo eziphakeme, izitshalo eziphezulu zekhwalithi, inqubo esheshayo, ukutshalwa kwezimali okuphansi kanye nezindleko zokusebenza, ukuphepha okuphephile nokusebenzisa umsebenzisi, isizinda se-ultrasonic yindlela ekhethiwe yokukhipha izinkampani ekukhiqizeni amancane nezimboni.
Isiqhamo se-Ultrasonic se-Cannabis
Ukukhishwa yi-ultrasound kusekelwe esimisweni se-acoustic cavitation. Ukusetshenziswa kwe-high-power ultrasound kuya kweziphuzo nama-slurries kuholela ekuhlaselweni okukhulu kwe-cavitation ne-shear force. Esikhathini slurry samaqabunga, amaqabunga, izimbali, iziqu kanye nezinye izingxenye zezitshalo, iseli yemifino liphazanyiswa yi-ultrasonic shear force kanye nezinhlanganisela eziphilayo ezifana ne-cannabidiol (CBD) ne-tetrahydrocannabinol (THC). Isizinda se-ultrasonic sisungulwe kahle njengezinqubo eziphumelelayo futhi ezinokwethenjelwa ukuze zihlukanise izakhi eziphilayo ze-bioactive. Ikakhulukazi ekwakhiweni kwe-sonication ye-high quality ye-cannabis oilication iqinisekiswe ngenxa yezivuno zayo eziphezulu (okukhishwe okuphezulu okukhipha), izinga elihle kakhulu (i-spectrum egcwele) kanye nesikhathi sokucubungula ngokushesha. Ukusetshenziswa kwamagagasi e-ultrasound kuyindlela yokwelashwa, okungesiyo enobuthi, ephephile, futhi enobungozi.
I-120L Ultrasonic Batch Extraction ye-Cannabis I-UIP2000hdT ne-Agitator
UP400St Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Botanicals njenge-Cannabis ku-8L Batch
Izinsimbi zokusebenza zokukhishwa kwe-High Performance Ultrasonics
I-Hielscher Ultrasonic ingumlingani wakho othembekile uma kuziwa ekusebenzeni okuphezulu kwe-ultrasonic isizinda semishini yesisindo se-cannabis namanye ama-botanicals. Njengoba kunezinhlelo ezingenakubalwa emhlabeni wonke, izitshalo ze-ultrasonic ze-Hielscher ziyaziwa ngokuphezulu kwezinga eliphezulu lokukhipha, ukuthembeka nokuqina.
Kusukela ezincane ezinama-ultrasonicators ezincane ezinama-compact afana ne- UP400St (400W) kuya emhlabeni wonke onamandla kakhulu UIP16000 (16kW, bheka pic. Ngakwesokunxele), i-Hielscher ihlanganisa uhla oluphelele lwezinto zokuhlanzwa. Lokhu kusivumela ukuba sincoma udokotela we-ultrasonic ofanele kakhulu ekudingeni inqubo yakho.
1 kuya ku-500mL – UP100H
10 kuya ku-8000mL – UP200Ht, UP400St
0.5-150L 0.2 kuya ku-4L / min I-UIP2000hdT
1 kuya ku-300L 2 kuya ku-10L / iminithi I-UIP4000hdT
– 10 kuya ku-100L / iminithi UIP16000
– sikhulu yinhlanganisela UIP16000
I-Ultrasonic Processor UP400ST
I-watts engu-400 watts ultrasonic ye-small batch isizinda (kufika ku-8L)
I-watts ka-2000 ye-ultrasonic ye-batch enkulu (isb. 150L) noma i-intanethi eqhubekayo
I-Ultrasonic Processor UIP4000hdT
I-4000 watts iprosesa ye-ultrasonic ye-batch enkulu (isb. 300L) noma i-aluminum eqhubekayo
I-Ultrasonic Processor UIP16000
I-16000 watts iprosesa ye-ultrasonic yezingxenye eziqhubekayo ze-inline
Sibutsetelo kanye nokuqhathaniswa kweNqubo Ejwayelekile Yokwenyuswa Kwe-Cannabis
Umkhiqizo: Isizinda se-ultrasonic sikhiqiza ukukhishwa kwe-spectrum ephezulu ephezulu. Ukukhishwa okungcolile kuhlanjululwa ngokuhlunga, iziphuzo zazihluzwayo kanye / noma i-winterization.
Izindleko zensiza: kusukela ngo-approx. U-US $ 5,000 kuya ku-US $ 100,000 amaningana kuye ngokuthi amandla nokucushwa
Ukusetha: ku-batch / umgqomo noma ukusebenza okuqhubekayo okuqhubekayo
Amakhono obuchwepheshe: kulula futhi ephephile ukusingatha nokusebenza
I-Solvent: zonke izinhlobo ze-solvents zingasetshenziswa njengamanzi, ingxube yamanzi, utshwala, i-isopropyl alcohol, i-hexane, i-ethanol, i-methanol, i-butane, amafutha yemifino (ioli yamafutha kakhukhunathi), i-glycerine, njll.
Amakhemikhali ahloswe: i-spectrum egcwele (wonke ama-cannabinoid atholakalayo kanye ne-terpenes)
Izinzuzo eziyinhloko: isivuno esikhulu, kulula ukusebenza, eshibhile, esilinganiselwe kalula ekukhiqizeni izimboni
Ukususwa kweSolvent (utshwala, i-ethanol)
Umkhiqizo: ngokuvamile ukukhishwa okungekho emthethweni okudinga ukulungiswa okuqhubekayo njengokungenisa ubusika noma ukuhlunga. Ngokuvamile i-ethanol extract ibuye ihlanjululwe ngokucwiliswa kwezidakamizwa emva kokubanda kanye nokuhlunga.
Izindleko zensiza: phakathi kuka- $ 5,000 nezigidi kuye ngokuthi usayizi, amakhono noma amakhono okuzenzekelayo.
Amakhono obuchwepheshe: efundiswe emakhemikhali ayisisekelo / okulinganisiwe.
Amakhemikhali ahloswe: wonke ama-cannabinoids atholakalayo, okukhishwayo okukhiphayo kunamanani aphansi we-monoterpenes.
Umkhiqizo: Ukukhishwa okungcolile okudinga ukulungiswa okuqhubekayo njengokubambisa i-winterization noma ukuhlunga
Izindleko zensiza: phakathi kuka- $ 100,000 nezigidi ze-USD, kuye ngobukhulu, amandla noma ukuzenzekelayo
Amakhono obuchwepheshe: wafundiswa ukusebenzisa i-CO2 yamanzi (uhlelo oluphakeme olucindezelayo – ukuphepha)
Amakhemikhali ahloswe: ama-cannabinoids ngamanani amancane kuphela we-monoterpenes
Umkhiqizo: shatter, budder, wax, i-HTFSE, i-HCFSE, noma i-extract engcolile ye-distilation, noma i-terpenes ukuze ifakwe ku-distillate
Izindleko zensiza: $ 5,000 kuya ku-$ 100,000 kuye ngokuthi usayizi namakhono
Amakhono obuchwepheshe: efundiswe ekhemistry nokuphepha (ukusetshenziswa kwamanzi afuthayo, i-liquid butane)
Amakhemikhali ahloswe: zonke izinhlobo ze-cannabinoids
Ukusetshenziswa kwama-Ultrasound Waves for Extraction
Lapho ukusebenza okuphezulu kwe-ultrasound kusetshenziselwa ama-liquid systems (kufaka phakathi ama-slurries nama-pastes ane-viscous) i-cavitation yama-acoustic ikhiqizwa. I-cousitation ye-Acoustic ichaza ubujamo besizukulwane, ukukhula nokuqhuma okuqhubekayo kwe-bubble cavitation. Phakathi nokusabalalisa kwamagagasi e-ultrasound, ama-bubbles avumayo aqhuma, akhule futhi awele phansi, lapho ibhola lingenakukwazi ukuthola amandla amaningi. I-bubble implosion idala izimo ezimbi kakhulu ezindaweni zokushisa eziphakeme kakhulu, izingcindezi, ukushisa nokuphuza amazinga kanye nokuhlukana kwengcindezi kanye ne-jets liquid. Izimo ezimbi kakhulu ziholela emthonjeni oshisayo, womshini, namakhemikhali. Ukuphazanyiswa kwamangqamuzana nokukhululwa kwamakhemikhali e-bioactive (= ukukhipha) kuwumphumela womshini, osebenza kahle futhi osebenza kahle.
Ngenxa yokukhishwa kwayo okuphakeme, izinga lokuphakama kwalo eliphezulu, isivinini senqubo kanye nokusebenza okulula nokuphephile, isizinda se-ultrasonic sisetshenziswa ngempumelelo kumakhemikhali amaningi e-botanical extraction.
Isizinda se-ultrasonic esivela kumaseli: isigaba esincane esithintekayo (TS) sibonisa indlela yezenzo phakathi kwesizinda se-ultrasonic kusuka kumaseli (ukukhulisa 2000x) [isisetshenziswa: Vilkhu et al. 2011]
Izibonelo ezivelele zesitokisi se-ultrasonic zikhona i-cannabis (ama-cannabinoids namafutha e-cannabis kusuka emanzini nase-hemp), i-curcumin, Upelepele, i-safari, ikhofi, umfutho obabayo, Amafutha e-Olive, Amafutha we-avocado, i-henna, Amakhambi Ayurvedic, I-Ginger, itiye, nezinye amakhambi okwelapha.
I-decarboxylation yisinyathelo esibalulekile sokukhiqiza okuphumelelayo kwezinto ezinkulu eziphilayo ezidalwa i-cannabis, njenge-Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), i-cannabidiol (i-CBD), ne-cannabigerol (i-CBG). I-Decarboxylation, eyaziwa nangokuthi "isebenza" noma "i-decarbing", isetshenziswe njengendlela yokwelapha ngaphambi kokwandisa okuqukethwe kwe-THC (delta9-tetrahydrocannabinol) esitshalweni. I-decarboxylation yamakhemikhali isabela lapho iqembu le-carboxyl (-COOH) lisuswa futhi i-carbon dioxide (CO2) ikhishwa. Ukuze ukwandise okuqukethwe kwe-THC yenkinga yesitshalo se-cannabis, isinyathelo senqubo yesimiso se-decarboxylation sisetshenziswa. Nge-decarboxylation, ubungakanani be-non-psychoactive Δ9-tetrahydrocannabinolic acid (THCA) kungashintshwa ibe yi-THC engasebenzi. I-Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid decarboxylates uma ishisa (kuya ku-105 ° C / 220 ° F ngamaminithi angu-30 uma i-dry material, kuze kube ngu-90min.).
Ngendlela efanayo, i-CBD-A impahla enotshani ye-cannabis ingahle yenziwe nge-decarboxylated nge ukwelashwa kokushisa bese iguqulwa ibe yi-CBD. Ukuze kusetshenziswe ubusika wezinto ezitshaliwe, isitshalo esomisiwe esiqoshiwe siyatshiswa kuze kube ngu-approx. 160 ° C / 320 ° F ngamaminithi angu-30-60. ukuqala i-decarboxylation.
I-Decarboxylation Izimo ze-Cannabinoids:
I-CBD: 160 ° C / 320 ° F
I-CBC: 220 ° C / 428 ° F
I-THC: 155 ° C / 314.6 ° F
I-CBN: 185 ° C / 365 ° F
I-THCV: 220 ° C / 428 ° F
Izinqubo eziphansi – Ukuhlunga nokuphuza izidakamizwa
Ngemuva kwesizinda se-ultrasonic, izinhlayiya ze-cannabis kufanele zihlungiwe kusuka ketshezi. Ngakho-ke, i-slurry ye-cannabis igxilile ngokusebenzisa isihlungi, njenge-mesh (isib. Isihlungi se-filter) noma usebenzisa umshini wokuhlunga. Ukuphuza utshwala omama obangelwayo (isb. I-ethanol) nokususwa kwe-cannabis bese kugxila ngokuhlukanisa i-ethanol. Izindlela zokutshala izidakamizwa ezijwayelekile zokususwa kwe-solvents yi-evaporators ezijikelezayo noma izinhlelo zokuphuza iziphuzo eziphuthumayo.
I-evaporator ejikelezayo (i-roto-vap colloquially) ijwayele ukuhlukanisa izixazululo ezinjenge-ethanol kusuka ku-cannabis, ngaleyo ndlela ikhiqize amafutha e-cannabis ahlanzekile. Ukushisa okulawulwayo nokuphathwa okulula kwenza i-rotary-evaporator imishini yokudonshulwa kwezidakamizwa ephezulu embonini ye-cannabis.
I-vacuum distillation isetshenziselwa ukuhlukanisa i-CBD yokusebenzisa imithi kanye nokwelapha lapho kudingeka khona ukususa i-terpenes noma i-THC. Njengoba i-terpenes, i-THC ne-CBD inamaphuzu aphezulu abilayo (ephakathi kuka-160-250 ° C / 310-482 ° F), ngaphansi kwezimo zomoya indawo yokuphuza izidakamizwa idinga ukwelashwa okushisa okuphezulu, okuyinto ehambisana nokuchithwa okushisa kwama-cannabinoids okushisa okushisa. Ukwengeza, ukuvezwa kwe-oksijeni kuqala ukusabela okwenziwe nge-oxidative, okuthinta ikhwalithi ye-cannabinoids engalungile. Ngokusetshenziswa kwe-vacuum, amaphuzu abilayo anciphisa. Ngaphezu kwalokho, i-oksijini isusiwe nokusetshenziswa kwe-vacuum. Ngaleyo ndlela, iziphuzo zazihluzwa ngaphansi kwezimo zokuphumula zihlisa ukwehla kwe-extracts kanye ne-oxydative.
I-winterization yinkqubo yokususa i-lipids, amafutha kanye nama-wax ngokuhlanza utshwala ukuze kuhlukaniswe i-cannabinoids ne-terpenes ezivela ezintweni ezingadingeki, njengezitshalo zezitshalo, amafutha kanye ne-chlorophyll. Ukuze i-winterization i-othanol ikhishwe i-ethanol iphinde ifakwe kumazinga okushisa angaphansi kuka -20 ° C / -6 ° F. Kulezi ziqhumane eziphansi, lipids, amafutha kanye nama-wax angena futhi angasuswa.